Lubnaan oo qarka u saaran burbur iyo dowlad la'aan - Caasimada Online
Home Dunida Lubnaan oo qarka u saaran burbur iyo dowlad la’aan
Lubnaan oo qarka u saaran burbur iyo dowlad la’aan
Beirut (Caasimada Online) – Ra’iisul Wasaarihii Lubnaan Saad Hariri ayaa iska casilay xilkiisii, kaddib markii sida uu sheegay uu ku fashilmay dadaalladii uu ku soo dhisi lahaa xukuumad lagu wada qanacsanyahay ee badbadisa dalkaas.
Hariri ayaa ku dhawaaqay go’aankiisa kaddib markii uu la kulmay madaxweyne Michel Aoun, isagoo sheegay in ay caddahay in aysan heshiin karin, isla markaana hoosta ka xarriiqay isqabqabsiga siyaasadeed ee hor istaagay dhismaha golaha wasiirada, xilli Lubnaan ay ku sii dhaceyso qalelaase baaxad leh.
Hariri, oo saddex goor oo hore Ra’isul Wasaare ka soo noqday Lubnaan ayaa ah siyaasi Sunni ah oo hogaamiya Sunniyiinta Lubnaan, waxaana xilka loo magacaabay bishii Oktober ee sanadkii hore, kaddib markii uu iscasilay Ra’iisul Wasaare Xasan Diab, kaddib qaraxii ka dhacay dekedda Beirut oo ay ku dhinteen dad ka badan 200 oo qofood.
“Waxaan ka cudurdaartay inaan dhiso dowladda,” ayuu yiri Hariri kaddib kulan qaatay 20 daqiiqo oo uu la yeeshay madaxweyne Michel Aoun.
Hariri ayaa ahaa Ra’isul Wasaaare magacaaban, waxaana isaga iyo madaxweyne Aoun ay si kala gooni ah u sheegeen inay la tashiyo u aadi doonaan xulifadooda siyaasadeed ee gudaha iyo dibadda.
Wasiirka Arimaha Dibadda Faransiiska Jean-Yves Le Drian, oo dalkiisu gumeystay Lubnaan mudo 25 sano ah ayaa ku tilmaamay ku guuldareysiga dhisidda dowlad cusub “dhacdo kale oo aad u xun” taas oo muujineysa “karti la’aanta madaxda Lubnaan inay xal u helaan dhibaatada ay abuureen.”
Xoghayaha Arrimaha Dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa isna iscasilaadda Hariri ugu yeeray “Niyadjab ku soo kordhay dadka reer Lubnaan.”
Dhaqaalaha Lubnaan ayaa burburay intii uu socday khilaafka siyaasiyiinta dadlkaas, iyadoo sare u kaca maciishadda iyo shaqa la’aantuna ay sababtay saboolnimo baahsan.